Somaliland: Maayarka Burco Oo Lagu Eedeeyay Inuu Cunaqabateeyay Qoysas Caydhoobay Oo Raashin Iyo Bustayaal Ka Sugayey Hay’adaha Samo-falka - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Maayarka Burco Oo Lagu Eedeeyay Inuu Cunaqabateeyay Qoysas Caydhoobay Oo Raashin...
Baro-kacayaal ka mid ah Dadkii ku caydhoobay Abaarihii Somaliland ka dhacay ee ku nool Xaafadda Aadan Saleebaan ee Magaalada Burco, ayaa Shalay isugu soo baxay Mudaharaad ballaadhan, kaasi oo ay kaga cabanayeen Maamulka Dawladda Hoose ee Magaaladaasi, gaar ahaan Maayarka Degmada Burco Maxamed Muraad.
Mudaharaadayaashan oo u badnaa Dad waayeel ah oo Rag iyo Dumar ah, ayaa Maayarka Magaalada Burco ku eedeeyay inuu Xayiraad saaray Caawimooyin Raashin iyo Bustayaal ah oo hay’ado siin lahaayeen Dadkaasi Barakacayaasha ah.
Dadweynaha Barakacayaasha ah ee Mudaharaadka dhigay ayaa sheegay in Maayirka Burco uu Xayiray isla-markaana hor-taagan yahay caawimooyin ay soo gaadhsiin lahaayeen Hay’ado dhowr ah iyo Dad kale oo ka shaqeeya Samo-falka Dadka Jillicsan.
“Ninkaa Maayarka ahi caawimadii la siinayey Dadka Masaakiinta ah wuu ka xayiray, Saddex Maalmood ayay yimaaddeen halkii Caawimada loogu qaybin lahaa, laakiin Saddexda Maalmoodba waalla dareeriyey, oo Ina Muraad (Maayarka Burco) ayaa yidhi ‘Waxba la bixin maayo’, markaa waxaanu doonaynaa in Dadkaa Masaakiinta ah Xayiraadda looga qaado Caawimada la siin lahaa.” Ayuu yidhi, Oday Waayeel ah oo ka mid ah Dadka Mudaharaadka iskugu soo baxay.
Haweenay ka mid ah Dadka Mudaharaadka ka sameeyay xaafadda Aadan Saleebaan ayaa iyaduna sheegtay “Waxaanu ka cabanaynaa Maayarka Burco oo Cuna-qabatayn toos ah na saaray.” Ayay tidhi, waxayna intaa ku dartay “Wuxuu diidday inay noo yimaaddaan Hay’adihii na Caawin lahaa, sidaasi darteed waxaanu doonaynaa in Maayarka Burco la naga qabto.”
Nin ka mid ah Waayeelka cabashada ka muujiyey faro-gelin ay sheegeen inuu ku hayo Maayarka Burco, ayaa yidhi “Maayarka Burco wuxuu nagu hayo faro-gelin, in badan ayuu faro-gelin nagu hayey, waxaanu Wasaaradda Arrimaha Gudaha ka codsanaynaa inay Maayarka Maxkamad noo soo taagto.”
Hooyo ka mid ah Hooyooyinka Mudaharaadka qaybta ka ahaa oo iyaduna cabashadeeda Warbaahinta marisay, ayaa tidhi “Waxaanu Madaxweynahayaga Muuse Biixi ka codsanaynaa inuu Xayiraadda nooga qaado caawimada uu Ina Muraad (Maayarka Burco) naga saaray.”
Oday ka mid ah Dadkaasi ayaa yidhi “Anigu waxaan ka mid ahaa Dadkii Reer Miyiga ahaa ee soo caydhoobay baan ahaa. Shalay (Doraad) Hay’addii noo timid (Caawimadii ay noo sidday) markii aanu is nidhi Afka isa saara ayaa Laad la nagaga dhuftay, markaa waxaanu Dawladda ka codsanaynaa in gargaarkaa Xayiraadda la nooga qaado.”
Xaafadda Aadan Saleebaan ee Magaalada Burco, oo ka mid ah meelaha ay ku nool yihiin Dadkii ku caydhoobay Abaarihii soo noqnoqday ee Somaliland ka dhacay, waxaana jira Hay’ado Xilligan oo qabowga badan ee Jiilaalku jiro doonayey inay gaadhsiiyaan Mucaawimo ay ka mid yihiin Raashin iyo Bustayaal kuwa dhaxanta ah, laakiin waxay Maayarka Burco ku eedeeyeen inuu Caawimadaa ka xayiray, inkasta oo aanay sheegin kuwa ay yihiin Hay’adaha caawimada u keenayey iyo Sababta Maayarku u diiddan yahay in caawimadaasi gaadho.
\_Wargeyska Himilo oo Xalay isku dayey inuu Maayarka Burco Maxamed Muraad wax ka waydiiyo eedaymahan loo jeediyey, ayaanay u suurto-gelin inuu helo Maayarka.